PowerChord- အရောင်းကိုယ်စားလှယ်-ဖြန့်ဝေထားသော ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအတွက် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုရှိသော ဒေသဆိုင်ရာ ဦးဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ဖြန့်ဖြူးခြင်း။ Martech Zone
PowerChord- အရောင်းကိုယ်စားလှယ်-ဖြန့်ဝေထားသော ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအတွက် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုရှိသော ဒေသဆိုင်ရာ ဦးဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ဖြန့်ဖြူးမှု
တနင်္လာနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 27, 2021 တနင်္လာနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 27, 2021 Stephanie Shreve
အမှတ်တံဆိပ် ကြီးလေလေ၊ ရွေ့လျားနေသော အစိတ်အပိုင်းများ ပေါ်လာလေလေ ဖြစ်သည်။ ဒေသတွင်း အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များ၏ ကွန်ရက်မှတစ်ဆင့် ရောင်းချသည့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် ပိုမိုရှုပ်ထွေးသည့် လုပ်ငန်းရည်မှန်းချက်များ၊ ဦးစားပေးများနှင့် အွန်လိုင်းအတွေ့အကြုံများ ရှိသည် — အမှတ်တံဆိပ်ရှုထောင့်မှ ပြည်တွင်းအဆင့်အထိ။
အမှတ်တံဆိပ်များကို အလွယ်တကူ ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီး ဝယ်ယူလိုပါသည်။ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များသည် ဦးဆောင်လမ်းပြအသစ်များ၊ ခြေလျင်ဝင်ရောက်မှုများနှင့် အရောင်းမြှင့်တင်မှုများကို လိုချင်ကြသည်။ ဖောက်သည်များသည် သဘောထားကွဲလွဲမှုကင်းသော အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းနှင့် ဝယ်ယူမှုအတွေ့အကြုံကို လိုချင်ကြသည်—နှင့် ၎င်းတို့သည် ၎င်းကို အမြန်လိုချင်ကြသည်။
အလားအလာရှိသော အရောင်းအ၀ယ်များသည် မျက်စိတစ်မှိတ်အတွင်း အငွေ့ပျံသွားနိုင်သည်။
အရောင်းကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးသည် ငါးမိနစ်နှင့် မိနစ် 30 အတွင်း အရောင်းသွက်လာပါက၊ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ခြင်း၏ အလားအလာများသည် အဆ 100 တိုးလာပါသည်။ ငါးမိနစ်အတွင်း ဦးဆောင်နိုင်ခြေက ၂၁ ကြိမ် ခုန်တက်သွားပါတယ်။
ပြဿနာမှာ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်-ရောင်းချသည့် ထုတ်ကုန်များအတွက် ဝယ်ယူရန် လမ်းကြောင်းသည် မြန်ဆန်သလောက် သို့မဟုတ် ပွတ်တိုက်မှု မရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဖောက်သည်တစ်ဦးသည် အမှတ်တံဆိပ်၏ ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ထားသော ဝဘ်ဆိုက်မှ ထွက်ခွာသွားသည့်အခါ ပြည်တွင်း၌ ဝယ်ယူရမည့်နေရာကို စုံစမ်းရန် မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။ ၎င်းသည် ဒေသဆိုင်ရာ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ထံ ခဲသွားခြင်းသို့ ပြောင်းလဲသွားတာလား သို့မဟုတ် ၎င်းသည် ဝင်စာပုံးအတွင်း ဖုန်မှုန့်များ စုဆောင်းမိပါသလား။ အကယ်၍ နောက်ဆက်တွဲ မည်မျှ လျင်မြန်စွာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သနည်း — အားလုံးဆိုလျှင်
၎င်းသည် ပုံမှန်အားဖြင့် စာရွက်စာတမ်း အားနည်းခြင်းနှင့် မကိုက်ညီသော လုပ်ငန်းစဉ်များပေါ်တွင် မှီခိုနေရသော လမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။ သက်ဆိုင်သူအားလုံးအတွက် လွတ်သွားသောအခွင့်အရေးများ ပြည့်နှက်နေသည့် လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
၎င်းကို software automation ဖြင့် ပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်။
PowerChord ပလပ်ဖောင်း ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
PowerChord သည် ဒေသတွင်း ဦးဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ဖြန့်ဖြူးမှုတွင် အထူးပြုထားသော အရောင်းကိုယ်စားလှယ်-ရောင်းချသည့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအတွက် SaaS ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုရှိသော ပလပ်ဖောင်းသည် အလိုအလျောက်စနစ်၊ မြန်နှုန်းနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့် ဒေသအဆင့်တွင် ဦးဆောင်မှုများကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေရန်အတွက် အစွမ်းထက်ဆုံး CRM ကိရိယာများနှင့် အစီရင်ခံခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များကို စုစည်းထားသည်။ အဆုံးစွန်အားဖြင့်၊ PowerChord သည် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကို ၎င်းတို့၏ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ကွန်ရက်မှစတင်၍ ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များနှင့် ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ရန် ကူညီပေးသည်၊ ထို့ကြောင့် ဦးဆောင်လမ်းပြမှုမှာ ပျောက်ကွယ်သွားမည်မဟုတ်ပေ။
အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များသည် PowerChord များကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ စစ်ဌာနချုပ်စင်တာ. Command Center မှတဆင့်၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည် ဦးဆောင်လမ်းပြမှုများ—၎င်းတို့မှအစပြုသည့်နေရာတိုင်း—ဒေသခံအရောင်းကိုယ်စားလှယ်များထံ အလိုအလျောက်ဖြန့်ဝေနိုင်သည်။
အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များသည် ထိုဦးဆောင်လမ်းပြများကို အရောင်းအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန် အခွင့်အာဏာရှိသည်။ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်တိုင်းသည် ၎င်းတို့၏ ဒေသတွင်း အရောင်းလမ်းကြောင်းကို စီမံခန့်ခွဲရန် ဦးဆောင်စီမံခန့်ခွဲရေးကိရိယာများကို အသုံးပြုခွင့်ရှိသည်။ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးမှ ဝန်ထမ်းများအားလုံးသည် ဦးစွာဆက်သွယ်မှုကို အရှိန်မြှင့်ရန်နှင့် အရောင်းရနိုင်ခြေကို တိုးမြင့်ရန်အတွက် ဦးဆောင်အချက်အလက်များကို ရယူနိုင်သည်။ အရောင်းလမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့် တိုးတက်မှုကို ဦးဆောင်နိုင်သည်နှင့်အမျှ၊ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များသည် လူတိုင်းတစ်မျက်နှာတည်းတွင် ရှိနေစေရန် မှတ်စုများထည့်နိုင်သည်။
ဒေသဆိုင်ရာ ဦးဆောင်အစီရင်ခံချက်သည် အမှတ်တံဆိပ်အထိ ပျံ့နှံ့သွားသောကြောင့် အရောင်းခေါင်းဆောင်မှုသည် နေရာအားလုံးတွင် တိုးတက်မှုကို အလွယ်တကူ စောင့်ကြည့်နိုင်သည်။
အမြန်ဆက်သွယ်မှုသည် အရောင်းပိတ်ရန်အတွက် အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သောကြောင့် PowerChord ပလပ်ဖောင်းတစ်ခုလုံးသည် အမြန်နှုန်းကို ဦးစားပေးပါသည်။ အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များကို SMS မှတစ်ဆင့် အပါအဝင် ပို့ဆောင်မှုအသစ်များကို ချက်ချင်းအကြောင်းကြားပါသည်။ ၎င်းသည် ပုံမှန်အားဖြင့် စားပွဲခုံနှင့် ကွန်ပြူတာတွင် တနေကုန် ချည်နှောင်ထားခြင်းမရှိသော ဒေသတွင်း အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ဝန်ထမ်းများအတွက် ကြီးမားသောအကူအညီဖြစ်နိုင်သည်။ PowerChord သည် မကြာသေးမီကပင် One Click Actions သည် အသုံးပြုသူများအား Command Center သို့ဝင်ရောက်ရန်မလိုအပ်ဘဲ အသိပေးချက်အီးမေးလ်အတွင်း ခဲ၏အခြေအနေကို အပ်ဒိတ်လုပ်ခွင့်ပြုသည့်အင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Powerchord ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် အစီရင်ခံခြင်း။
PowerChord သည် အမှတ်တံဆိပ်များ၏ ဒေသတွင်းရောင်းချမှုအား အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် အစီရင်ခံခြင်းကို ဗဟိုချုပ်ကိုင်ထားသည်။ ၎င်းတို့သည် တစ်နေရာတည်းတွင် ကလစ်နှိပ်ရန် ခေါ်ဆိုမှု၊ လမ်းညွှန်ချက်များအတွက် ကလစ်များနှင့် ခဲဖောင်တင်သွင်းမှုများ အပါအဝင်—ဒေသခံ အရောင်းကိုယ်စားလှယ် ဦးဆောင်သည့် အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုများကို ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး ၎င်းတို့သည် အချိန်နှင့်အမျှ လမ်းကြောင်းပြောင်းပုံကို ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ဒက်ရှ်ဘုတ်သည် စျေးကွက်ရှာဖွေသူများအား ထိပ်တန်းစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော ထုတ်ကုန်များ၊ စာမျက်နှာများနှင့် CTAs များကဲ့သို့သော ဒေသန္တရစတိုးဆိုင်များ၏ ခေတ်ရေစီးကြောင်းများကို တိုင်းတာရန်နှင့် ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် အခွင့်အလမ်းသစ်များကို အကဲဖြတ်ရန်လည်း ခွင့်ပြုပါသည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်၊ အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း- အရောင်းကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးစီသည် ၎င်းတို့၏ဒေတာများကိုသာ မြင်နိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်မှာ၊ မန်နေဂျာများသည် ၎င်းတို့တာဝန်ယူရသည့် တည်နေရာတစ်ခုစီ၏ ဒေတာကို အမှတ်တံဆိပ်အတွက်ရရှိနိုင်သည့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကြည့်ရှုမှုအထိ အားလုံးမြင်နိုင်သည်။ လိုအပ်ပါက ဤဒေတာဝင်ရောက်ခွင့်ကို ကန့်သတ်ရန် ခွင့်ပြုချက်များကို အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေနိုင်သည်။
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည် စကားဝိုင်းတစ်ခုလျှင် ကုန်ကျစရိတ်၊ ကလစ်များ၊ ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အခြားပန်းတိုင်များအပါအဝင် ၎င်းတို့၏ ဒေသတွင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကမ်ပိန်းများလုပ်ဆောင်ပုံကို ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ PowerChord ၏ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် အစီရင်ခံခြင်း အင်္ဂါရပ်သည် အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် ဝင်ငွေများကြားတွင် အစက်များကို ချိတ်ဆက်ပေးကာ၊
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦးဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ဖြန့်ဖြူးရေးကြိုးပမ်းမှုများနှင့်အတူ ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းမှုများသည် ဝင်ငွေဒေါ်လာ 50,000 ရရှိခဲ့ပါသည်။ ယင်း၏ 30% ကို အရောင်းအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့သည့်လတွင် ဦးဆောင်မှု 1,000 ရရှိခဲ့သည်။
ဤအရာအားလုံးကို ပေါင်းစည်းခြင်း- Grasshopper Mowers သည် ဒေသတွင်း အရောင်းကိုယ်စားလှယ် ဝဘ်ဆိုက်များကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် 500% ဦး ဆောင်ရန် PowerChord ကို အသုံးပြုသည်။
လေးငယ် ရိတ်စက် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ အမှီအခိုကင်းသော အရောင်းကိုယ်စားလှယ် 1000 ခန့်၏ ကွန်ရက်မှတဆင့် စီးပွားဖြစ်အဆင့်ရိတ်စက်များကို သီးသန့်ရောင်းချသည့် ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီသည် ဖောက်သည်အသစ်များကို ဆွဲဆောင်ရန်နှင့် ၎င်း၏စျေးကွက်ဝေစုကို တိုးမြင့်ရန် အခွင့်အလမ်းရှိကြောင်း သိရှိခဲ့သည်။ ဒီအခွင့်အရေးက ပြည်တွင်းကုန်သည်တွေရဲ့ လက်ထဲမှာ ရှိတယ်။
ယခင်က၊ အလားအလာရှိသော ဖောက်သည်များသည် Grasshopper ဝဘ်ဆိုက်တွင် ကုန်ပစ္စည်းလိုင်းများကို စူးစမ်းလေ့လာသောအခါ၊ ၎င်းတို့သည် ဒေသတွင်း အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ဆိုက်များသို့ နှိပ်လိုက်သည်နှင့် အရောင်းအခွင့်အလမ်းများ လျော့ပါးသွားခဲ့သည်။ Grasshopper တံဆိပ်တပ်ခြင်း ပျောက်ကွယ်သွားကာ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ဆိုဒ်များသည် ဒေသန္တရစတိုးဆိုင်အချက်အလက် ကင်းမဲ့သော ပြိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းလိုင်းများကို ပြသခဲ့ပြီး သုံးစွဲသူများ စိတ်ရှုပ်ထွေးစေပါသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များသည် ၎င်းတို့ပေးဆောင်ခဲ့သော ဦးဆောင်လမ်းပြများကို မျက်ခြေမပြတ်ကာ အရောင်းပိတ်ရန် ရုန်းကန်နေရသည်။
Grasshopper သည် ဦးဆောင်မှုများအပေါ် အာရုံစိုက်ကာ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်အမှတ်တံဆိပ် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေမည့် ဖန်တီးမှု၊ အလိုအလျောက်စနစ်သုံးခြင်းနှင့် စျေးကွက်အတွင်းရောင်းချသူ၏ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့် ၎င်း၏အမှတ်တံဆိပ်မှ ဒေသတွင်းခရီးကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ရန် Grasshopper နှင့် ခြောက်လကျော်ကြာ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ လေးငယ်သည် ဦးဆောင်မှု 500% တိုးလာပြီး ပထမနှစ်တွင် အွန်လိုင်းမှ ခဲထုတ်လုပ်ရောင်းချမှု 80% တိုးလာသည်။
Case Study အပြည့်အစုံကို ဤနေရာတွင် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
မင်းက ဦးဆောင်လို့ရပြီ။ ကဲ ဘာလဲ?
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ရင်ဆိုင်နေရသော စိန်ခေါ်မှုများထဲမှတစ်ခုမှာ ဦးဆောင်လမ်းပြများကို အရောင်းအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်။ သိသာထင်ရှားသော စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ဒေါ်လာများသည် စားသုံးသူများကို ဆွဲဆောင်သုံးစွဲကြသည်။ ဒါပေမယ့် သင်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ ဦးဆောင်လမ်းပြတွေကို တုံ့ပြန်ဖို့ စနစ်တွေမရှိရင် ဒေါ်လာတွေ အလဟသဖြစ်ကုန်မယ်။ သုတေသနပြုချက်များအရ ဦးဆောင်သူအားလုံး၏ ထက်ဝက်ခန့်သာ အမှန်တကယ် ဆက်သွယ်ခံရသည်။ သင့်ရောင်းအားကို သိသိသာသာသက်ရောက်မှုရှိစေရန် ဦးဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှု အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြင့် သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာများ၏အရှိန်အဟုန်ကို အသုံးချပါ။
ဦးဆောင်သူတိုင်းကို တုံ့ပြန်ပါ။ - ဤအချိန်သည် သင့်ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့် အဖိုးတန်အချက်အလက်များကို မျှဝေရန်နှင့် ဝယ်ယူမှုဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချရာတွင် ဖောက်သည်အား ကူညီပေးရမည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ ဦးဆောင်သူအား အရည်အချင်းပြည့်မီပြီး ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ဖောက်သည်တစ်ဦးစီ၏ စိတ်ဝင်စားမှုအဆင့်ကို ဆုံးဖြတ်ရန် အချိန်လည်းဖြစ်သည်။ သက်ဆိုင်ရာနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆန်သော ဆက်သွယ်မှုများကို အသုံးပြုခြင်းသည် ပြောင်းလဲခြင်းကို မြှင့်တင်ပေးလိမ့်မည်။
အမြန်တုံ့ပြန်မှုသည် အရေးကြီးပါသည်။ - ဖောက်သည်တစ်ဦးသည် သင်၏ ဦးဆောင်မှုပုံစံကို ဖြည့်စွက်သောအခါ၊ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ ဝယ်ယူမှုခရီးအတွက် နောက်တစ်ဆင့်တက်ရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ သူတို့က သင့်ထုတ်ကုန်ကို စိတ်ဝင်စားဖို့ လုံလောက်တဲ့ သုတေသနတွေ လုပ်ထားပြီး သင့်ဆီက ကြားဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ InsideSales.com ၏ အဆိုအရ5မိနစ်အတွင်း ဝဘ်ဦးဆောင်မှုများကို လိုက်လုပ်သည့် စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည် ၎င်းတို့ကို ပြောင်းလဲရန်9ဆ ပိုများသည်။
နောက်ဆက်တွဲ လုပ်ငန်းစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ပါ။ - ဦးဆောင်သူများနောက်သို့ လိုက်ရန်အတွက် သတ်မှတ်ထားသော ဗျူဟာတစ်ခုရှိရန် အရေးကြီးပါသည်။ ချက်ခြင်းနောက်မလိုက်ဘဲ သို့မဟုတ် လုံးဝမေ့ပစ်လိုက်ခြင်းဖြင့် အခွင့်အရေးများကို လက်လွတ်မခံချင်ပါ။ သင်မရသေးပါက CRM တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် သင်စဉ်းစားနိုင်သည် — ဤနည်းဖြင့် သင်သည် နောက်ဆက်တွဲရက်စွဲများ၊ သုံးစွဲသူများအတွက် အသေးစိတ်မှတ်စုများကို သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပြီး ၎င်းတို့ကို နောက်ပိုင်းရက်များတွင်ပင် ပြန်လည်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။
သင်၏ဗျူဟာတွင် အဓိကပါတနာများကို ထည့်သွင်းပါ။ - အမှတ်တံဆိပ်များရောင်းချသည့်ကုန်သည်များအတွက်၊ ဒေသအဆင့်တွင် လူကိုယ်တိုင်ရောင်းချသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ မပိတ်မီတွင် ဒေသတွင်း အရောင်းကိုယ်စားလှယ်သည် နောက်ဆုံးထိတွေ့မှုဖြစ်သည်။ သင်၏ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ကွန်ရက်အား ၎င်းတို့အား ရင်းနှီးစေရန် ကိရိယာများဖြင့် ခွန်အားဖြစ်စေသည်— သင့်ထုတ်ကုန်တွင် ၎င်းတို့ကို စမတ်ကျကျဖြစ်စေမည့် အကြောင်းအရာဖြစ်စေ သို့မဟုတ် ဦးဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် တုံ့ပြန်မှုအချိန်များကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ၎င်းတို့ကို အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ပေးမည့် အကြောင်းအရာများဖြစ်သည်။
‍PowerChord ဘလော့ဂ်တွင် နောက်ထပ်အရင်းအမြစ်များကို ရယူပါ။
Tags: ကုန်သည်အရောင်းကိုယ်စားလှယ် ဦးဆောင်သော ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအရောင်းကိုယ်စားလှယ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအရောင်းကိုယ်စားလှယ် ဦးဆောင်မှု ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာချက်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ဦးဆောင်အစီရင်ခံခြင်း။ကုန်သည်များကျိုင်းကောင်နှံကောင်ဖြတ်စက်ခဲခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဦးဆောင်ဖြန့်ဖြူးခဲစီမံခန့်ခွဲမှုpowerchord
Stephanie Shreve သည် Partner Engagement ၏ ဒုတိယဥက္ကဌဖြစ်သည်။ PowerChord. သူမသည် ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအမှုဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအမှတ်တံဆိပ်များနှင့် ဗျူဟာမြောက်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကို ပံ့ပိုးရန် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောအဖွဲ့များကို ဦးဆောင်သည့် အတွေ့အကြုံ 20+ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သည်။ စွမ်းဆောင်ရည်မှတ်တမ်းနှင့်အတူ၊ Stephanie သည် လုပ်ငန်းရလဒ်များကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် ဖြေရှင်းနည်းများဖန်တီးရန် သုံးစွဲသူများနှင့် ခိုင်မာသောဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ရန် ကြိုးပမ်းသည်။ စျေးကွက်သစ်များရောက်ရှိရန်နှင့် လုပ်ငန်းကြီးထွားရန် ထွန်းသစ်စနည်းပညာများဖြင့် တင်ပြသည့်အခွင့်အလမ်းများကို သူမက လက်ခံယုံကြည်ပါသည်။
Audiense Insights- Audience Segmentation Intelligence နှင့် Analysis Software
ConvertMore- ဤဖုန်း Callback Widget ဖြင့် နောက်ထပ် ဝဘ်ဆိုဒ်လည်ပတ်မှုများကို ပြောင်းလဲပါ။